गुडविल फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १९ असार २०७६)
१ वर्षको कारोबार अवधिमा कम्पनीको शेयरमूल्य अधिकतम रू. १३८ र न्यूनतम रू. १११ पुगेको छ । बुधवार कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १३३ कायम भएको छ । सो दिन कम्पनीको २ हजार ९२ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ३ करोड १४ लाख खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २ करोड ७० लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८० करोड पुगेको छ । गत आवको तुलनामा जगेडा कोषको रकम ११ प्रतिशत बढेर रू. १५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव २५ छ । प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ११९ दशमलव ५१ छ भने तरलता अनुपात ३१ दशमलव ६२ प्रतिशत छ ।